S: Ma waxaad tahay warshaddii?
A: Waxaan nahay Manufacturer ku yaala Dongguan, China.Specialized in mashiinka calaamadaynta iyo warshadaha baakadaha in ka badan 10 sano, waxay leeyihiin kumanaan kiisaska macaamiisha, soo dhaweynaya kormeerka warshad.
S: Sidee loo hubiyo in tayada calaamadayntaadu ay wanaagsan tahay?
A: Waxaan isticmaaleynaa qaab farsamo oo xoog leh oo waara iyo qaybo elektiroonig ah oo qaali ah sida Panasonic, Datasensor, SICK ... si loo hubiyo waxqabadka calaamadaynta xasilloonida 2017 waxaa la siiyay Shiinaha "Shirkad Cusub oo Farsamo Sare ah"
S: Immisa mashiin ayaa warshaddaadu haysaa?
A: Waxaan soo saareynaa mashiinka calaamadaynta koollada caadiga ah iyo kuwa gaarka loo sameeyay alaabtaada, xalka calaamadaynta ayaa loo bixin doonaa si waafaqsan.
S: Waa maxay shuruudaha hubinta tayadaada?
Fineco waxay si adag u fulisaa mas'uuliyadda boostada,
1) Markaad xaqiijiso amarka, waaxda naqshadeynta ayaa soo diri doonta naqshadda ugu dambeysa ee xaqiijinta kahor wax soo saarka.
2) Naqshadeeyuhu wuxuu raaci doonaa waaxda farsamaynta si uu u hubiyo in qayb kasta oo makaanik ah si sax ah iyo waqtigeeda loogu shaqeeyo.
3) Ka dib markii dhammaan qaybaha la dhammeeyo, mas'uuliyadda naqshadeeyaha ku wareejinaya Waaxda Golaha, taas oo u baahan inay ku ururiso qalabka waqtigii loogu talagalay.
4) Mas'uuliyadda loo wareejiyay Waaxda hagaajinta ee mashiinka la isku daray. Iibka ayaa hubin doona horumarka iyo jawaab celinta macaamiisha.
5) Ka dib hubinta fiidiyowga macaamiisha / kormeerka warshadaha, iibku wuxuu diyaarin doonaa gaarsiinta.
6) Haddii macaamiishu ay dhibaato kala kulmaan codsiga, iibku wuxuu weydiin doonaa Waaxda iibka kadib inay si wadajir ah u xalliyaan.
J: Waxaan ku hayn doonaa Dhammaan Nakhshadeynta Macaamiishayada, Logo, iyo Tusaalaha kaydkayaga, waligeenna ma tusin macaamiisha la midka ah.
S: Ma jiraa jihada rakibaadda ka dib markii aan helnay mashiinka?
A: Guud ahaan waxaad si toos ah u codsan kartaa calaamadeeyaha marka aad hesho, sababtoo ah waxaanu si fiican u hagaajinnay saamigaaga ama alaabta la midka ah. Intaa waxaa dheer, buug-tilmaameedka iyo fiidiyowyada ayaa lagu siin doonaa.
S: Waa maxay agabka summada mashiinkaagu isticmaalo?
J: dhejiska is-ku dhejiska ah.
S: Mashiin noocee ah ayaa buuxin kara shuruudaha calaamadaynta?
J: Pls waxay soo bandhigaan alaabtaada iyo cabbirka summada (sawirka muunada la calaamadeeyay waa mid waxtar leh), ka dib xalka summeynta ku habboon ayaa loo soo jeedin doonaa si waafaqsan.
S: Ma jiraa wax caymis ah oo dammaanad qaadaya inaan heli doono mishiinka saxda ah ee aan bixiyo?
J: Waxaan nahay alaab-qeybiye jeeg goobta jooga oo ka yimid Alibaba.Xaqiijinta Ganacsiga waxay bixisaa ilaalin tayo leh, ilaalinta rarida wakhtiga iyo ilaalinta lacag bixinta 100% badbaado leh.
S: Sideen ku heli karaa kaydka mishiinada?
J: Daboolida aan macmalka ahayn ee dhaawacan waxa loo diri doona si xor ah oo bilaasha ayaa lagu soo diri doona mudada 1 sano ah ee dammaanadda.